Best OKB mgbanwe
Best Buy price OKB $ 4.85 OKB/BTC BHEX
Ahịa ahia kacha mma OKB $ 5.27 OKB/ETH Fatbtc
Enwere ike gbakọọ ọnụego kacha mma OKB site na ilele nsonaazụ nke ụzọ abụọ ego ego na mgbanwe ego ego. Ọnụego mgbanwe ego ego dị ugbu a OKB bụ ego mgbanwe n'etiti ndị azụmaahịa niile. Ihe omuma ego a bu nke e kpere site na nguzozi nke ndi mmadu n’abia. Ọnụ ọgụgụ ndị na-azụ ahịa na ndị na-ere OKB na onye na-agbanyere ego crypto ọ bụla dị iche. Ya mere, mgbanwe ego ego OKB ọnụego mgbanwe bụ n'otu n'otu na mgbanwe ego ego ego ọ bụla.
Best OKB obere akpa
Ka 28, 2020 Kachasị mma ịzụta OKB na Ka 28, 2020 Ọnụ ahịa kacha mma OKB na $ sell_pair ụzọ azụmaahịa na $ sell_market ahịa.
Mpempe akwụkwọ Crypto bụ koodu mmemme ezubere maka nchekwa, ndozi, ịkwụ ụgwọ ego crypto. Mpempe akwụkwọ ego crypto nwere oke nke: ntụkwasị obi, ịdị mfe, nchekwa. Mpempe akwụkwọ kachasị mma OKB nwere ntụkwasị obi kacha mma yana nchekwa kacha mma. Ejiri ezigbo mgbanwe ego ego OKB n'oge ahọpụtara site na ịmụ nsonaazụ nke ọnụego azụmaahịa maka ịzụta na ire nke ego ego.
Ụlọ ahịa OKB kacha mma
Ọ bụ ihe ezi uche dị na iche na ọ bụrụ na nso nso a na mgbanwe e nwere ọnụahịa zụrụ nke OKB, mgbe ahụ ọ bara uru ịchọ ọnụego mgbanwe kacha mma na mgbanwe ego ego a. Kachasị mma OKB ịzụta na ire ọnụ ahịa maka taa bụ 28/05/2020 n'isi nke ibe. Na tebụl a, ebe egosiri na OKB ego ego ego, ị nwere ike ịhụ nke ọma ọnụahịa nke OKB na nyochaa nke kachasị mma. N'ihi nke a, họrọ nke ị ga - eji agbanwee mgbanwe kacha mma. Ihe ndekọ ntanetị "Kasị mma OKB maka taa 28/05/2020" na-enyocha ọnụego ego ego kachasị mma na ntanetị.
USDT BTC ETH USD KRW TWD IDR USDK USDC Ọzọ ...
Tebụl na-egosi taa ọnụahịa OKB nke ọ bụla site na netwọk ego ego. A gbanwere ọnụego mgbanwe maka ọnụọgụ abụọ abụọ na dollar US.
OKEx OKB/ETH $ 5.19 $ 39 360 307 -
OKEx OKB/USDT $ 5.19 $ 36 076 390 -
OKEx OKB/BTC $ 5.18 $ 26 595 670 -
OKEx OKB/USDK $ 5.17 $ 6 302 488 -
OKEx OKB/USDC $ 5.18 $ 88 -
Bitfinex OKB/BTC $ 5.22 $ 319 -
Bitfinex OKB/USDT $ 5.15 $ 78 -
Bitfinex OKB/USD $ 4.96 $ 11 -
Coinall OKB/USDT $ 5.07 - -
Coinall OKB/BTC $ 5.04 - -
Coinall OKB/ETH $ 5.07 - -
BitMax OKB/USDT $ 4.97 $ 252 096 -
BitMax OKB/ETH $ 4.98 $ 224 015 -
BitMax OKB/BTC $ 4.95 $ 182 204 -
CoinEx OKB/USDT $ 4.96 $ 1 918 586 -
CoinEx OKB/BTC $ 4.93 $ 1 465 631 -
ProBit Exchange OKB/KRW $ 4.87 $ 751 232 -
ProBit Exchange OKB/USDT $ 4.97 $ 21 067 -
BitAsset OKB/TWD $ 4.98 $ 6 401 146 -
BitAsset OKB/USDT $ 5.01 $ 0.001001 -
HBTC OKB/USDT $ 5.02 $ 155 589 -
HBTC OKB/BTC $ 5 $ 17 359 -
Hoo OKB/USDT $ 5.01 $ 336 598 -
BKEX OKB/USDT $ 4.99 $ 56 659 906 -
BiKi OKB/USDT $ 5.01 $ 341 371 -
FOBLGATE OKB/KRW $ 4.92 $ 5 092 -
FTX OKB/USD $ 5.20 $ 214 201 -
ViteX OKB-001/BTC $ 5.19 $ 1 403 -
BBX OKB/USDT $ 5.20 $ 1 341 166 -
BitMart OKB/USDT $ 4.95 $ 1 140 048 -
DragonEX OKB/USDT $ 5.12 $ 16 997 531 -
CoinBene OKB/USDT $ 5.01 $ 4 154 465 -
Indodax OKB/IDR $ 5.01 $ 150 426 -
YunEx OKB/USDT $ 5.20 $ 317 193 -
HitBTC OKB/BTC $ 4.98 $ 5 108 -
BW.com OKB/USDT $ 4.96 $ 470 816 -
Gate.io OKB/USDT $ 5.21 $ 25 777 -
Fatbtc OKB/ETH $ 5.27 $ 56 662 -
Ihe kachasị mma OKB ọnụego ịzụta nwere ike ọ gaghị adị na dollar, mana iji ego dị iche ma ọ bụ ego ego. Anyị na-egosikwa ụdị ego a ga-eji zụta OKB. N'aka nri nke ọnụahịa ire kacha mma bụ njikọ dị na onye na-echigharị ebe azụmaahịa ahụ na ọnụahịa kachasị mma nke OKB were. Ọnụahịa kacha mma OKB na-ebilite mgbe ụfọdụ mgbe ị na-ere maka ego ego ọzọ, ọ bụghị maka dollar.
Ọ dị mkpa ịmata ụdị mkpụrụ ego OKB mgbe azụtara ego kachasị mma. Anyị na-egosipụta ozi a n'aka nri nke ọnụego ego ego kacha mma. Mgbanwe kachasị mma maka ịzụ ma ọ bụ ire OKB edepụtara na tebụl dị na peeji a. Nyocha nke mgbanwe ego dị iche iche n'elu tebụl nke mgbanwe ego ego kachasị mma na-enye gị ohere ịhụ OKB azụmahịa azụmahịa na ego ego ọzọ ma ọ bụ ego mba. A na-emelite peeji maka ụdị mgbanwe kacha mma maka ịzụ na ire OKB. ahia crypto na - aga n'ihu.